Soo dejisan WinRAR 6.00 – Windows – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WinRAR
WinRAR – software ah oo awood badan ku cadaadisaa xogta iyo la archives shaqeeyaan. software The taageertaa shaqada leh qaabab archives waaweyn iyo bixisaa heer sare ah riixo. WinRAR waa awoodaa inuu ka soo kabsado buugagga taariikhda oo burburay, la abuuro is-soo saarida iyo archives multivolume, la archives password-ilaaliyo ama Windows XP shaqada, iwm software The falgala nidaamka sahamisa hawlgalka u saamaxaya in ay alaabahooda ama ka soo fagid archives oo aan la bilaabay software ah. WinRAR waa ay awoodaan in ay kala jabeen archives geliyey Muga gaarka ah rikoorka aamin on sidayaal xogta.
Heerka sare ee riixo
Taageerada ugu qaabab waaweyn archive
Waxay abuurtaa buugagga taariikhda multivolume
Isku dhex leh sahamisa ah
Soo dejisan WinRAR
Faallo ku saabsan WinRAR
WinRAR Xirfadaha la xiriira